Wasiirka Maaliyadda Puntland oo Barlamaanka Hortagay – Radio Daljir
Diseembar 7, 2015 5:02 b 0
Somalia, December 07, 2015-(Daljir)_Wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Shiikh Axmed ayaa maanta hortagay golaha baarlamaanka Puntland,waxaana uu ka hor akhriyey miisaaniyada dowladda lixdii bilood dambe ee sanadkan.
Cabdullaahi Shiikh ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay ka badalan tahay kuwii hore,islamarkaana la jaan qaadi karto miisaaniyadda habka caalamiga ah ujeedaduna tahay Puntland inay hesho miisaaniyad lagu kalsoonaan karo.
Waxaa uu tilmaamay in miisaaniyaddu sanadkan ay uqayb sanayd labo lix biloodle janaayo ilaa juun iyo luulyo ilaa decembar waxaa uuna sheegay in dib loogu laabtay miisaaniyadii la ansixiyey 2015,isagoo tilmaamay inay ku jireen musharooyin shaqaale oo laga sugayey bangiga adduunka oo aan la bixin iyo daymo mushahar oo aan la bixin 2014, isagoo sheegay inay keentay isku dheeli tir la aan miisaaniyadeed.
Wasiirka ayaa sheegay ku tala galka miisaaniyada lixda bilood ee damba inay dhan tahay 4,111,667 $ bishiiba, islamarkaan isugu keenta lixda bilood ay tahay 24’670,000’2 $.
Cabdulahi ayaa xusay in miisaaniyada sanaka 2015 lixdii bilood ee dambe uu cel celis ahaan dhan yahay 4,84000 $,wasiirka ayaa sheegay in lixdii bilood ee dambe sanadkan hal ku dhig looga dhigay muhiimadsiinta mushaharooyinka shaqaalaha,Ciidanka,raashinka ciidanka iyo howl socodsiinta dowladda.
Isagoo intaa ku daray in Wasaaraddu ku guulaysatay in Ha’yadd walba hesho musharkeeda bil walba,sidoo kale wuxuu sheegay in Ha’yaddo ay siiyeen mushahar bil ka badan.
Waxaa uu carababaabay in bishii ugu dambaysay lixda bilood ay hakad galisay mushahar bixinta dabaylihii ka dhacay xeebaha Puntland iyo xaalada Gaalkacyo oo kharash baaxad leh lagu bixiyey.
Wasiirka ayaa tilmaamay inay intaa bar bar socdeen mushar shaqaale,Ha’yaddo soo kordhay,Gunooyin,Qaramayn ciidan kuwaas oo ku jiray miisaaniyadii horay baarlamaanku ansixiyeen.
Sidoo kale wasiirku waxaa uu sheegay inay iyaguna jireen ka qayb qaadashada xaaladaha wadanka,oo ay kamid ahaayeen dhismaha Kastamka Tuurdibi,madaxtooyada Gaalkacyo,dhismayaasha goloyaasha deegaanada,Shirar wadatashiga,dib uheshiisiinta iyo martigalinta waftiyada heer Fadaraalka iyo heer maamul goboleed.
Dajinta Miisaaniyadan ayuu sheegay wasiirku in loo maray dib u eegis lagu sameeyey meelihii isdhinku ku yimi, waxaa sidoo kale si ka fiirsi leh la dorosay dakhliga la filankaro inuu dowladda usoo xaroodo bilkasta ,iyagoo qorshaha lagu darsanayo Garoonka diyaaradaha Boosaso iyo Kastamka Tuurdibi ayuu sheegay wasiirku.
Wasiirka ayaa khud badiisa kusoo gaba gabeeyey in qorsha lagu darsaday korar dakhlig oo laga filikaro wasaaradaha Kalluumaysiga,Duulista Hawada iyo Warfaafinta,waxaa uuna xusay in laga filayo korar dakhli oo gaaraya 688,333$ waxayna ka dhigaysaa dakhliga gudaha 4.800,000$.